Diyaaradda drone-ka iyo kamaradda DJI ma xiriir la leedahay Apple inta aan ka fikirno? | Waxaan ka socdaa mac
Kuweena raaca labada shirkadood, Apple iyo DJI, waxa aan ku weydiiyo maqaalkan macno badan ayuu samayn karaa. Waxaan la socday Apple in ka badan 10 sano, si kastaba ha noqotee waxaan ku soo galay adduunka DJI, oo ah shirkad hormuud u ah iibinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, oo leh kaamiro xasilloon oo la yiraahdo OSMO, ka dib markii aan helay OSMO Mobile intaa ka dibna waxaan ku soo galay diyaarad aan duuliye lahayn oo loo yaqaan 'Mavic Pro drone' oo dhowaan aan la galay DJI Goggles iyo OSMO + cusub.
Ilaa iyo hada waxaan dhihi karnaa waxa kaliya ee aad kaheli karto waa inaan ka jeclahay Apple iyo DJI labadaba tayada wax soo saarkooda. Waxaan qabanayaa casharro fiidiyoow ah waxaanan go'aansaday in sharadka DJI uu sax yahay.
Si kastaba ha noqotee, in muddo ah hadda, waxaan ogaaday in DJI iyo habka iibinta ee Apple ay aad isugu egyihiin. Wax soo saarka labada shirkadood ayaa si taxaddar leh loo daryeelaa, baakidhkooda ayaa loo malaynayaa inay yihiin kuwa faahfaahsan iyo waxyaabaha ugu yar ee ku jira iyaga oo la taaban karo. Waxaas oo dhan, waxaan bilaabay inaan ka shakiyo in DJI uu xiriir la leeyahay Apple sida aan filayno.
Hagaag, hadii tuhunada aan qabay aysan kufilanayn, heshiisyada udhaxeeya DJI iyo Apple waxay umuuqdaan habeenki si diyaaradaha drones-ka iyo xasiliyayasha iphone ay u bilaabaan in lagu iibiyo Dukaankooda Apple, kaas oo horey u dajiyay isha. hoosaad noocyada alaabooyinkaas ah. Si aad u xoqdo curlka, DJI ayaa sii daayay a daabacaadda gaarka ah ee diyaaraddaada aan duuliyaha lahayn ee Mavic Pro bannaan oo aad ugu dhow falsafadda Apple.
Markuu waxaas oo dhan arkay ... Miyuu xiriir la leeyahay Apple inta aan ka fikirno? DJI ma noqon doontaa shirkadda ay Apple tijaabinayso wax kasta oo ku saabsan VR oo sidaas awgeedna ay u kala duwanaanayso alaabooyinka duubista fiidiyowga oo si buuxda isula jaan qaada? Heerka Apple?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Diyaaradda drone-ka iyo kamaradda DJI ma xiriir la leedahay Apple inta aan ka fikirno?